Lamaanayaasha Bollywood-ka Iska Dhex Doorteen Kuwooda Ugu Hadal Heynta Badnaa Balse Aan Is Calfanin Qaybta 3-aad (+Sawiro) – Filimside.net
Lamaanayaasha Bollywood-ka Iska Dhex Doorteen Kuwooda Ugu Hadal Heynta Badnaa Balse Aan Is Calfanin Qaybta 3-aad (+Sawiro)
Kusoo dhawaada qaybta sedexaad aan kaga hadleenay marka ay dhacday in jilaayaasha Bollywood-ka jecel dhex maro balse nadiib daro aysan is calfanin sida diiwaan gashan kuwooda ugu hadal heynta badnaa.
Hadaba xogtaan waa mid soo jireen ah sidoo kalena waqti ahaan aad u fog xiliga ay soo bilaabatay inay xidigaha Bollywood-ka is doortaan laakiin kuwooda aan is calfanin hadal xoogana abuureen ayaan si gaar ah u fiirin doonaa:
Hrithik Roshan Iyo Kareena Kapoor:
Caruur la isku daayo lana dhaho isla bood booda waqtigana isla qaato ceebta ka dhalan karto lama qiyaasi karo.
Laakiin Kareena iyo Hrithik waxay sii mareysaa in ka badan 14-sano inaysan isla shaqeynin ama wax filim ah isla keenin!!!
Shatrughan Sinha (Canjeex) Iyo Reena Roy: Waxay ahaayeen lamaane shidan oo Bollywood-ka iska dhex doorteen dhamaadkii 70-kii sidoo kalena aad loo hadal heyn jiray xiligoodii xiriirka ka dhaxeeyay.
La Soco Qaybta 4-aad Maqaalkaan Xiisaha Badan……….